Ciidamo Ku qeylinaya "Hadduu Dhurwaa Madax noqdo Ari waa u dhammaatay" oo dibad baxyo ka dhigaya Duleedka Muqdisho.
Sunday April 07, 2019 - 09:40:57 in Wararka by Super Admin
Boqolaal katirsan ciidamada dowladda Federaalka ayaa dibad baxyo cabasho mushaar la'aan ah ka dhigaya deegaanno dhanka galbeed uga beegan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
Ciidamada oo kasoo gadooday deegaanno katirsan gobolka Sh/Hoose ayaa ku qeylinaya erayo ka dhan ah Farmaajo iyo Kheyre waxayna ku hanjabeen in ay hubkooda iibsan doonaan haddii aan lasiin mushaar ka maqan muddo Afar bilood ah.
Boqolaal askari oo iskusoo baxyo ka dhigay deegaanka Ceelasha Biyaha ayaa ku hadaaqaya Erayo ay kamid yihiin "Hadduu dhurwaa madax noqdo Ari waa u dhammaatay"!.
Askarta iyo saraakiisha dibad baxyada dhigaya ayaa ku eedaynaya madaxda dowladda in ay inkirayaan xuquuqdii dhaqaale oo ay ciidamadu ku lahaayeen, waxay meesha ka saareen wararka ay ku hadaaqaan Farmaajo iyo Kheyre ee ah in ciidamada marka ladiiwaan geliyo kadib lasiin doono lacago mushaar ah.
Cabadashadan ayaa imaanaysa xilli maalmo ka hor uu Xasan Cali Kheyre sheegay in ay diiwaan geliyeen in kabadan 16 kun oo askari kuwaas oo akoonno loo sameeyay islamarkaana bil walba loogu shubi doono lacag dhan 130 dollar.